ငြိမ်နေတာကြာလို့ အမျိုးသားထုကြီးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေချပြလိုက် တဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်းရဲ့ ပုံအလှလေးများ – Shwe Ba
ငြိမ်နေတာကြာလို့ အမျိုးသားထုကြီးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေချပြလိုက် တဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်းရဲ့ ပုံအလှလေးများ
By Shwe BaPosted on February 19, 2021 February 19, 2021
မြင်သူ တိုင်းငေး လောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာ ကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ် နော် . . . ။ မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင် ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများ အပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တ ဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရ ရှိထားတဲ့ သူမ ကတော့ ဆိုရှယ် media လော က မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် နေ သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … ။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျ ပြီး အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက် ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ရေပန်း စား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ် … ။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာ တွေ့ရပါ တယ် … ။
ပုံလေး တွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း တစ် ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ် ။ သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံလေး ကို တင်ပေး လာတာ ပဲဖြစ် ပါ တယ် … ၊၊ အခုဆိုရင်လည်း မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန် လည် မျှဝေ ပေး လိုက် တယ် နော် … ။
ျမင္သူ တိုင္းေငး ေလာက္ တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာ ကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း ကို သိၾက မယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္ . . . ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာက ကို ဝင္ ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ား အျပားရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို တ ျဖည္းျဖည္း ရရွိ လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးမႈ ရ ရွိထားတဲ့ သူမ ကေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာ က မွာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ ေန သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီ က် ၿပီး အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ ရွိ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ေရပန္း စား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾက တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာ ေတြ႕ရပါ တယ္ … ။
ပုံေလး ေတြတိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း တစ္ ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္း ေန တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သူမကေတာ့ ခပ္ေခ်ခ် ရိုက္ထား တဲ့ ပုံေလး ကို တင္ေပး လာတာ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ … ၊၊ အခုဆိုရင္လည္း ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း ရဲ့ အလွပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္ လည္ မၽွေဝ ေပး လိုက္ တယ္ ေနာ္ … ။
Previous post လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် စတိုင်အပြည့်နဲ့ အလှပြလိုက်တဲ့ Mဆိုင်းလု
Next post လှပတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ချပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်